ကာရန်မဲ့ အတွေးစများ: October 2008
မှတ်ချက်8 ခု ရေးပြီးချိန်: 10/31/2008 07:15:00 PM
စာရေးသူ: s0wha1 Labels: my Poems
အောင်တံခွန်ကြီး ဆွတ်ခူးနိုင်ပြီ ထင်ခဲ့သား။
လူတို့ လုံ့လ အထူးပြုလို့
လမ်းပျောက်မှာလည်း ငါ မကြောက်၊
ကမ်းဝေးမှာလည်း ငါ မစိုး
လျှောက်ရင်း လဲပြို၊ လှော်ရင်း နစ်မြုပ်
အဲဒီတုန်းကတော့ သူရဲကောင်းကြီး အဖြစ်ပေါ့။
လမ်းအဆုံးလို့ ငါ ထင်တဲ့အခါ
တောင်ထွဋ္ဋ်ရဲ့ ခြေအရင်း ရပ်နေမိမှန်း မသိခင် အထိ။
ဩော်... စုတ်ပြတ်သွားတဲ့ ကမ်းနားသစ်ပင်
ငြိုငြင်သူ ဗလာ၊ ကာကွယ်သူ သုည
(နောင်တဆိုတဲ့) အနက်ရောင် တိမ်မျှင်
ငါ ရောက်နေနှင့်မှ ဖြစ်လိမ့်မယ်။
(25 Oct 2008)
ဓာတ်ပုံ မူပိုင် --- ဂူဂယ်မှ ရှာဖွေတွေ့ရှိသော ဓာတ်ပုံကို အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်4 ခု ရေးပြီးချိန်: 10/26/2008 01:29:00 AM
စာရေးသူ: s0wha1 Labels: ဗဟုသုတ ဖြစ်ဖွယ်, မြန်မာစာ
မလိုအပ်ဘဲ ပိုတတ်သော ရေးချ
မြန်မာစာ စာလုံးပေါင်း သတ်ပုံတွင် ၀င်ရောက်နှောင့်ယှက်နေသော အရေးတစ်ခုမှာ မလိုအပ်ဘဲ ပိုတတ်သော ရေးချ ဖြစ်ပါသည်။
မလိုအပ်ဘဲ ပိုတတ်သော ရေးချတစ်ခုမှ ပတ်တွင် ပါတတ်သော ရေးချ ဖြစ်သည်။
သီတင်းတစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်လည်၊ သုံးလပတ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ပတ်သက်သည် စသည်တို့ကို သီတင်းတစ်ပါတ်၊ နှစ်ပါတ်လည်၊ သုံးလပါတ်၊ ပါတ်ဝန်းကျင်၊ ပါတ်သက်သည် စသည်ဖြင့် ရေးမှားတတ်ကြသည်။
ပတ်၏အနက်မှာ လည်သည်၊ လှည့်သည်၊ ရစ်သည်၊ ၀ိုက်သည်၊ ၀ိုင်းဝန်းသည် တို့ဖြစ်သည်။ မြန်မာစကား စစ်စစ်ဖြစ်ပြီး ရေးသောအခါ ရေးချမလိုသော စကားလုံးဖြစ်သည်။
သီတင်းတစ်ပတ်၊ ရက်သတ္တတစ်ပတ်ဆိုသည်မှာ ၇ ရက်၊ ၇ နေ့တွင် စသော နေ့တစ်နေ့မှ နောက်တဖန် ထိုနေ့သို့ ထပ်မံလည်ပတ် ရောက်ရှိလာသော ကာလကို ဆိုလိုသည်။ တနည်းအားဖြင့် ၇ ရက် ပတ်မိသော၊ ၇ ရက်လည်သော ကာလကို ဆိုလိုသည်။
နှစ်ပတ်လည် ဆိုသည်မှာလည်း ၁၂ လတွင် စသော လတစ်လလမှ နောက်တဖန် ထိုလသို့ ထပ်မံလည်ပတ်ရောက်ရှိသော ကာလကိုပင် ဆိုလိုသည်။ တနည်းအားဖြင့် ၁၂ လပတ်မိသော၊ ၁၂ လ လည်မိသော ကာလပင် ဖြစ်သည်။
သုံးလပတ်၊ လေးလပတ် စသည်တို့သည်လည်း သုံးလပတ်မိသော၊ လေးလပတ်မိသော အချိန်ကာလပင် ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင် ဆိုသော စကားသည် ပတ်၊ ၀န်း၊ ကျင် ဟူသော စကားလုံး သုံးလုံးကို ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းထားသော စကားဖြစ်သည်။ အနက်တူသော စကားသုံးလုံးဖြစ်သည်။ ပတ်သည်လည်း လည်၊ လှည့်၊ ရစ်၊ ၀ိုင်း အနက်။ ၀န်းသည်လည်း လည်၊ လှည့်၊ ရစ်၊ ၀ိုင်း အနက်။ ကျင်သည်လည်း လည်၊ လှည့်၊ ရစ်၊ ၀ိုင်း အနက်ပင်ဖြစ်သည်။ လှည့်လည်ရစ်ဝိုင်းလျက် ရှိသော နေရာဒေသ၊ အချိန်ကာလကိုပင် ပတ်ဝန်းကျင် ဟု ဆိုသည်။
ပတ်သက်သည် ဆိုသော စကားတွင်လည်း ပတ်မှာ ရစ်လည်သည်၊ စပ်ဆိုင်သည် ဟူသော အနက်ပင်ဖြစ်သည်။
ရွာတစ်ပတ်၊ ကျောင်းတစ်ပတ်၊ ပတ်ကုံးဝန်းကျင်၊ အအေးပတ်သည် စသည်တို့ကဲ့သို့သော စကားများမှ ပတ်သည်လည်း လည်ပတ်၊ ရစ်ပတ် အနက်ပင်ဖြစ်သည်။
အချုပ်အားဖြင့်ဆိုသော် မြန်မာစကား ပတ် တွင် ရေးချပါရန် မလိုပါ။
သို့ရာတွင် ပ တွင် ရေးချလျက် တ သတ်ရသော ပါတ် အရေးများလည်း ရှိသည်။ ယင်းတို့အား မြန်မာစကားများ မဟုတ်ကြ။ ပါဠိသက် စကားများသာ ဖြစ်ကြသည်။
နိပါတ်တော်၊ ပါဏာတိပါတ်၊ ပိဏ္ဍပါတ်၊ ဥပ္ပါတ်ပျံသည် စသည့်စကားများ ဖြစ်ကြသည်။
ယင်းတို့တွင် နိပါတ်တော်မှ နိပါတ်ကား ပါဠိ နိပါတပုဒ်တည်း။
ပါဏာတိပါတ်ကား ပါဠိ ပါဏာတိပါတ၊ ပိဏ္ဍပါတ်ကား ပါဠိ ပိဏ္ဍပါတ၊ ဥပ္ပါတ်ပျံသည်မှ ဥပ္ပါတ်ကား ပါဠိ ဥပ္ပါတ တို့ဖြစ်ကြသည်။
မလိုအပ်ဘဲ ပိုတတ်သော ရေးချများကို ဘေးဥပဒ်၊ မဏ္ဍပ်၊ ဒဏ်၊ အရုဏ်ကျင်း၊ ကန်း၊ အနာဂတ် ဟူသော စကားများကို ရေးရာ၌လည်း တွေ့ရတတ်သည်။ ဘေးဥပါဒ်၊ မဏ္ဍာပ်၊ ဒါဏ်၊ အာရုဏ်ကျင်း၊ ကာန်း၊ အနာဂါတ်ဟူ၍ ရေးကြခြင်းမှာ မလိုအပ်ဘဲ ရေးချ ပိုနေခြင်းပင်ဖြစ်သည်။
ဥပဒ် (ဘေး)။ ။ ဥပဒ်မှာ ပါဠိသက်ပုဒ် ဖြစ်သည်။ ပါဠိတွင် ဥပဒ္ဒ၀ဟု ရှိသည်။ ဥပဒ္ဒ၀သည် ဘေး၊ ဘေးရန်၊ အန္တရာယ်ကို ဆိုလိုသည်။ ဥပဒ္ဒ၀ပုဒ်သက်ဖြစ်သဖြင့် ဥပဒ်ဟုသာ ရေးရသည်။ ပ တွင် ရေးချ မထည့်ရပါ။ (ဥပါဒ်ဌီဘင် မှ ဥပါဒ်ကား ဥပ္ပါဒ ပုဒ်သက်ဖြစ်သဖြင့် ပ တွင် ရေးချပါရသည်။)
မဏ္ဍပ်။ ။ ပါဠိတွင် မဏ္ဍပ ဟုရှိသည်။ အကာမဲ့ ယာယီအဆောင်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ မဏ္ဍပ ပုဒ်သက်ဖြစ်သဖြင့် မဏ္ဍပ်ဟု ရေးချမပါဘဲ ရေးရသည်။
ဒဏ်။ ။ ဒဏ်ခတ်သည်၊ ဒဏ်တပ်သည်၊ ဒဏ်ပေးသည်၊ ဒဏ်ရိုက်သည်၊ ဒဏ်ကြေး၊ ကြိုးဒဏ်၊ ထောင်ဒဏ်၊ သဲဒဏ်၊ ရေဒဏ်၊ အပြစ်ဒဏ်၊ ဘေးဒဏ်၊ ဒဏ်ရာဒဏ်ချက် စသည်တို့ကို ဒ တွင် ရေးချမပါဘဲ ဒဏ် ဟုသာ ရေးရသည်။ ပါဠိတွင် ဒဏ္ဍ ဟူသော ပုဒ်ရှိသည်။ ဒဏ္ဍသည် တုတ်၊ တုတ်တံ၊ အရိုးတံ၊ အပြစ်ပေးခြင်း စသည့်အနက်များရှိသည်။ ဒဏ္ဍပုဒ်သက်ဖြစ်၍ ဒ တွင် ရေးချမပါဘဲ ဒဏ်ဟုသာ ရေးရသည်။ ကနက္ကဒဏ်ထီးကို ရေးရာတွင်လည်း ဒဏ်တွင် ရေးချမပါရချေ။ ကနက=ရွှေ + ဒဏ္ဍ=အရိုး၊ ရွှေအရိုးတပ်ထီးဟု ဆိုလိုသည်။ ကနကဒဏ်မှ မြန်မာမှုအရေးတွင် ကနက္ကဒဏ်ဖြစ်လာသည်။
အရုဏ်။ ။ နေအရုဏ်အရုဏ်ကျင်းပြီး အရုဏ်ဆွမ်း စသည်တို့တွင် အ သရဖြင့်သာ အရုဏ်ဟု ရေးရသည်။ အာသရဖြင့် အာရုဏ် ဟု မရေးရ။ အ တွင် ရေးချမပါရ။ ပါဠိတွင် အရုဏ ဟူသော ပုဒ်ရှိသည်။ ပါဠိ အရုဏသည် အမှောင်ပျောက်ပြီး ရှေးဦးတက်လာသော ရောင်နီ၊ ရောင်နီလာချိန်ကို ဟောသည်။ အာရုဏ်ဟု အ တွင် ရေးချပြီး ရေးမှားကြသည်မှာ ပြောဆို ရွတ်ဖတ်ရာတွင် "အာယုန်" ဟု ပြောဆို ရွတ်ဖတ်နေကြသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မြန်မာအဘိဓာန်တွင် အရုဏ် ကို "အရုဏ်/အာယုန်/န၊ နေမထွက်မီ အရှေ့အရပ်မှ ဦးစွာ ဖြစ်ပေါ်သော ရှေ့ပြေးအလင်းရောင်။ [ ပါ၊ အရုဏ ]"ဟု ဖွင့်ဆိုထားသည်။
ကန်း။ ။ မျက်စိကာန်းသည်ဟု ရေးမှားတတ်ကြသည်။ ပါဠိတွင် မျက်စိ တဖက်ကန်းဟော ကာဏ ဟူသော ပုဒ်ရှိသဖြင့် ပါဠိ ကာဏ ပုဒ်သက်ဟု ယူလိုကြသည်။ ကန်း သည် ဆိုသော စကားမှာ မြန်မာစကားစစ်စစ်ဖြစ်သည်။ ရေ၊ အရည်ကုန်ပျောက်၊ ခြောက်ခန်းသည်ကိုပင် ကန်း သည်ဟု ဆိုသည်။ ကန်းနှင့် ခန်း အနက် ဆက်နွှယ်သည်။ မျက်စိထဲတွင် မြင်စေတတ်သော အရည်ခန်းလျက် မမြင်နိုင်ဘဲရှိသည်ကိုပင် မျက်စိကန်းသည်ဟု ဆိုသည်။ ရေတွင်းတွင် ရေမရှိဘဲ ခြောက်ခန်းသည်ကိုပင် ရေတွင်းကန်းသည်ဟု ဆိုသည်။ က တွင် ရေးချမပါဘဲ ကန်း ဟုသာ ရေးရသည်။
အနာဂတ်။ ။ ပါဠိ အနာဂတ ပုဒ်သက်ဖြစ်သည်။ မလာရောက်သေးသော၊ နောင်လာလတ္တံ့သော ဟူသော အနက်ကို ဟောသည်။ ထို့ကြောင့် မလာရောက်သေးသော ကာလ၊ နောင်လာလတ္တံ့သော ကာလကို ရေးလိုလျှင် အနာဂတ်ကာလ၊ အနာဂတ် ဟု ရေးရသည်။ ဂ ငယ်တွင် ရေးချ ထည့်၍ အနာဂါတ် ဟု ရေးလျှင် မှားသည်။
မလိုအပ်ဘဲ၊ ပိုတတ်သည့် ရေးချကို
မမှားအောင် သတိချပ်၊ ရေးတတ်စေလို
ဒဏ်ခတ်သည့် ဒဉ်ထိုထို၊ မဏ္ဍပ်ဆိုတ၀။
မျက်ကန်းငယ် တဖြာ၊ အရုဏ်လာ အရုဉ်တက်ကယ်နှင့်၊
မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား နှင့် မြန်မာ သတ်ပုံကျမ်းကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်လိုသူများ အတွက်...
ကိုးကား။ ။၁၉၉၃၊ ဩဂုတ်လတွင် ထုတ်ဝေသော ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာစာအဖွဲ့၏ "မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကား"
မှတ်ချက်4 ခု ရေးပြီးချိန်: 10/25/2008 07:26:00 PM
စာရေးသူ: s0wha1 Labels: s0wha1, ရှူခင်းဓာတ်ပုံ
စာရေးဖို့ mood မလာသေးလို့ ပုံတွေ အရင်ကြည့်ထားကြပါဦး။ နောက်များမှ ပီနန်အကြောင်း အေးဆေး ရေးတော့မယ်။
မလေးရှား ပီနန်မြို့ပေါ်က တရုတ်ဘုံကျောင်း တစ်ကျောင်းပုံပါ။ မလေးရှားငွေ မီလီယံနဲ့ ချီပြီး အကုန်ခံ တည်ဆောက်ထားတဲ့ nine Emperors Temple... ပန်းပု၊ ပန်းကြွတွေကို တရုတ်ပြည်ကနေ မှာထားတာလို့ ဆိုပါတယ်။
အဲဒီ ဘုံကျောင်းထဲမှာ တွေ့ရတယ်။ ကလေး ၁၀၀ ပုံပါ။ ကလေးမရတဲ့ စုံတွဲတွေ ဒီပုံလေးဆောင်ထားပြီး ဆုတောင်းရင် ကလေးရတယ်တဲ့။
ဒါက ကွမ်ရင်မယ်တော်ကျောင်း။ တောင်ပေါ်မှာ ရှိတယ်။ ကွမ်ရင်မယ်တော် ရုပ်ထုက တော်တော်မြင့်တယ်လို့ ဆိုပေမယ့် အသစ်ပြန်ပြင်နေလို့ တက်မကြည့်ခဲ့ရပါဘူး။
ဒါတွေက ရှေးဟောင်း ဘုံကျောင်းပုံပါ။ သက်တမ်းတော်တော်ရင့်ပြီလို့ ပြောပေမယ့် ၁၀၀ ကျော်လောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
အဲဒီနယ်မြေကို ရှေးဟောင်းနယ်မြေအဖြစ် ယူနက်စကိုက သတ်မှတ်ထားပါတယ်။
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 10/22/2008 08:16:00 PM
စာရေးရမှာ ပျင်းနေတာနဲ့ ပီနန်မြို့အကြောင်းလည်း ရေးမယ်၊ ရေးမယ်ဆိုပြီး မရေးဖြစ်ဘူး။ ပုံတွေကလည်း ဒီတိုင်းတင်လို့ မရ။ နည်းနည်းပါးပါးဖြစ်ဖြစ် ဓာတ်ပုံအကြောင်းလေးတွေ ရေးရဦးမယ်ဆိုတော့ ပြန်ရောက်တာ တပတ်လောက်ရှိနေပေမယ့် ခုမှ ပို့စ်တင်ဖြစ်တယ်။ ပီနန်ကျွန်းလေးက ဘာမှတော့ မထူးခြားပါဘူး။ လူတွေနေတဲ့ မြို့တွေထဲက မြို့တခုပါပဲ။ အစားအသောက်ကတော့ မဆိုးဘူး။ ဈေးလည်း သက်သာတယ်။ ရာသီဥတုကတော့ စင်္ကာပူနဲ့ တူတူပဲဆိုတော့ ပူတာမှ မတရား၊ မိုးရွာရင်လည်း ချက်ချင်းပါပဲ။
၆၀ဒီဂရီလောက် မတ်ဆောက်တဲ့ တောင်ပေါ်ကို ရထားနဲ့ တက်ကြည့်ကြတာ။ ရထားခက ၂ ရင်းဂစ်ပဲ ပေးရလို့ ကျွန်မတို့မှာ တအံ့တဩ။ ကုန်ဈေးနှုန်းတွေကတော့ စင်္ကာပူနဲ့ အကွာကြီးပဲ။ တော်တော်သက်သာတယ်။ အသွား ၁၅ မိနစ်၊ အပြန် ၁၅မိနစ်ကြာပါတယ်။
အပေါ်ရောက်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက်ချိန် ၁၅ မိနစ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီပေါ်က မြင်ကွင်းတွေပါ။ အပေါ်စီးကနေ မြင်ရတဲ့ ပီနန်မြို့ကိုလည်း ပြန်ရိုက်ထားတာပေါ့။
ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်တုန်းက ခံတပ်ပုံပါ။ ပီနန်မြို့ ပင်လယ်အစပ်နားမှာ ရှိပါတယ်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်တုန်းက ကျဆုံးသွားတဲ့ မဟာမိတ်တွေရဲ့ စစ်သင်္ချိုင်း။ စစ်သင်္ချိုင်းဆိုတာထက် အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်ဆိုရင် ပိုမှန်မလားဘဲ။
Shopping Center ထဲက ဒေ၀ါလီနေ့အတွက် ပြင်ဆင်ထားတာလေးကို ရိုက်လာတာ။
ဒါက ပီနန်မြို့ပေါ်မှာတော့ မဟုတ်ဘူး။ ပီနန်မြို့ရဲ့ မြို့နယ်တခုလို့ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ ပီနန်ကျွန်းနဲ့ နာရီဝက်လောက် ကားစီးရတယ်။ ပီနန်မြို့နဲ့ ပင်လယ်ခြားထားတဲ့အတွက် အဲဒီတံတားကို ဖြတ်ရတာတင် ၁၀မိနစ်ကျော်ကြာပါတယ်။ တံတားအရှည်က ၂၄ကီလိုမီတာ ရှိပါတယ်။ ကျွန်မတို့က အဲဒီမြို့နယ်မှာတည်းပြီး ပီနန်ကို သွားသွားလည်တာပါ။
အဲဒီမြို့နယ်က Jasco ကုန်တိုက်ပုံပါ။
နောက်ရက်မှ ကျန်တဲ့ပုံတွေ ထပ်တင်ဦးမယ်။
မှတ်ချက်2 ခု ရေးပြီးချိန်: 10/21/2008 10:15:00 PM
(၁၈၊ အောက်တိုဘာ၊ ၂၀၀၈)
မှတ်ချက်2 ခု ရေးပြီးချိန်: 10/20/2008 08:29:00 PM
စာမရေးနိုင်ချိန် Forward မေးလ်က ပုံတွေ တင်ပေးလိုက်တာ။ တော်တော်များများလည်း ကြည့်ပြီးရောပေါ့။
Tiger's Nest Monastery, perched precariously on the edge ofa3,000-feet-high cliff Paro Valley, is one of the holiest places in Bhutan
Wat Rong Khun in Chiang Rai, Thailand is unlike any Buddhist temples in the world.
Prambanan isaHindu temple in Central Java, Indonesia. The temple was built in 850 CE, and is composed of 8 main shrines and 250 surrounding smallers ones
No one knows exactly when the Shwedagon Paya [wiki] (or Pagoda) in Myanmar was built - legend has it that it is 2,500 years old though archaeologists estimate that it was built between the 6th and 10th century.
Temple of Heaven isaTaoist temple in Beijing, the capital of China. The temple was constructed in 14th century by Emperor Yongle of the Ming Dynasty
Chion-in Temple was built in 1234 CE to honor the founder of Jodo (Pure Land) Buddhism,apriest named Honen, who fasted to death in the very spot.
In the 19th Century, Dutch occupies of Indonesia foundamassive ancient ruin deep in the jungles of Java. What they discovered was the complex of Borobudur,agigantic structure built with nearly2million cubic feet (55,000 m³) of stones. The temple has nearly 2,700 relief panels and 504 Buddha Statues.
The Harmandir Sahib (meaning The Abode of God) or simply the Golden Temple [wiki] in Punjab, India is the most sacred shrine of Sikhism.
The Temple of Srirangam ( Sri Ranganathaswamy Temple [wiki], in the Indian city of Tiruchirapalli (or Trichy), is the largest functioning Hindu temple in the world (Ankor Wat os the largest of all temple, but it is currently non-functioning asatemple - see below).
Last but definitely not least is the largest in history and the inspiration to countless novels and action movies of Hollywood: Ankor Wat.
မှတ်ချက်2 ခု ရေးပြီးချိန်: 10/18/2008 06:55:00 AM
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 10/17/2008 10:10:00 AM
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ကျော်သွားတာ နှစ်ရက်တောင် ရှိပြီ။ သီတင်းကျွတ်အကြောင်း ပို့စ်ရေးချင်ပေမယ့် လပြည့်နေ့မှာမှ မလေးရှား ပီနန်မြို့ကနေ ပြန်ရောက်တာဆိုတော့ ပင်ပန်းပြီး စာမရေးနိုင်ဘူး။ ဒီဘက်မှာတော့ မြန်မာနိုင်ငံထက် တစ်ရက်စောပြီး လပြည့်တယ်။ အဲဒီတော့ ဒီက လပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့ ၁၃ရက်နေ့က ပီနန်ကျွန်းပေါ်မှာပဲ ရှိသေးတာ။
သီတင်းကျွတ်ရောက်ပြီဆိုတော့ တကိုယ်တည်းသမားတွေကို ထုံးစံအတိုင်း မထိခလုတ်၊ ထိခလုတ် sms တွေ ပို့ပြီး စကြ၊ နောက်ကြတယ် ထင်ပါ့။ အဲဒီမှာ တစ်ယောက်က မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်သွားပုံရတယ်။ ဘာလို့ဆို အရင်နှစ်တွေက "အပျိုကြီးပဲလား"တို့၊ "သီတင်းတောင်ကျွတ်ပြီနော်"တို့ဆိုတဲ့ ဖုန်းမက်ဆေ့မျိုး မရဘဲ ခုလို sms လေး တစ်စောင်ကို သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်စီက forward ရလိုက်တယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး။ အပျော်ပေါ့လေ၊ သဘောတူသူလည်း ရှိ၊ မတူသူလည်း ရှိမှာပဲ။ သားသမီးတွေကို အိမ်ထောင်မပြုစေချင်တဲ့ ကျွန်မအမေကတော့ ဒီမက်ဆေ့ခ်ျကို သဘောကျနေမလားမသိ။ ;))
He + She = Love,
He + She + Love = Marriage,
He + She + Love + Marriage =Child,
He + She + Love + Marriage + Child = Family,
He + She + Love + Marriage + Child + Family = Problem.
So... "East or West Single Life is Best" to send all the singles who enjoy the single life. This sms is only for single. ;) တဲ့။ :P ကျွန်မလည်း Single တွေကို ပြန် မျှဝေလိုက်တယ်နော်။
သီတင်းကျွတ်ညမှာ ဖယောင်းတိုင်မီးတွေ၊ မီးပုံးတွေ ထိန်လင်းနေမယ့်၊ လူတွေ ၀တ်ကောင်းစားလှဝတ်ပြီး ဥဒဟို လမ်းလျှောက်နေကြမယ့် မြန်မာပြည်ကို လွမ်းတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အဲဒီလို မြင်ကွင်းတွေ မမြင်ရတာ ၇ နှစ်တောင် ရှိပြီကော။ ကိုအန်ဒီရဲ့ ရွှေမျိုး ကန်တော့ပွဲ ကို ဖတ်ပြီးလည်း ကြည်နူးရသေးတယ်။ ကျွန်မတို့ မိသားစုမှာတော့ အဲလို ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် ကန်တော့ကြတာ အစဉ်အလာမရှိခဲ့ဘူး။ ခုမှ အဲဒီပို့စ်ဖတ်ပြီး နောက်နှစ်က စလို့ ကျင့်သုံးဖို့ မောင်နှမတွေကို ပြောရမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ ရှိတုန်းကတော့ အမေ၊ အဖေကို ကန်တော့၊ အဖွားအိမ်ကို သွားကန်တော့ရင်း ၀မ်းကွဲမောင်နှမတွေ စုံရုံလောက်ပဲ ရှိတာ။ ဒါတောင် ကျွန်မတို့ မိသားစုတွေ ရန်ကုန်မှာ ရှိတဲ့အချိန်ပေါ့။ နယ်ရောက်နေရင်တော့ သီတင်းကျွတ်လည်း အဖွားတို့ဆီ မရောက်ဖြစ်ပါဘူး။
၁၄ရက်နေ့ ညကတောင် စဉ်းစားမိနေသေးတယ်။ ဩော်... ငါတို့ မောင်နှမတွေလည်း ပြောင်းပြန်တွေ ဖြစ်နေပြီလို့။ Fathers Day, Mothers Day နေ့တွေမှာပဲ အဖေနဲ့အမေကို လက်ဆောင်တွေပေး၊ ကိတ်မုန့်တွေ လှီးလုပ်ကြတယ်။ သီတင်းကျွတ်မှာကျ မကန်တော့ဖြစ်ဘူးလို့လေ။
ဒါပေမဲ့ မနေ့က လပြည့်ကျော် ၁ ရက်နေ့မှာ မကြီးတို့ လင်မယားက အဖေနဲ့ အမေအတွက် အင်္ကျီတွေဝယ်ပြီး သီတင်းကျွတ်လာကန်တော့တယ်ဆိုတော့မှ ကျွန်မတို့မောင်နှမတွေလည်း တပျော်တပါး ၀င်ဦးချကြတယ်။ ကျွန်မတို့နဲ့ အတူနေတဲ့ ကိုကြီးတို့ လင်မယားနဲ့ မီးမီးလေးပါ ပါတာပေါ့။ အမြဲတမ်း ဒီလိုပါပဲ မကြီးက အဖေများနေ့တွေ၊ အမေများနေ့တွေမှာဆိုလည်း ခုလို ကန်တော့ဖို့ လက်ဆောင်တွေ၊ ကိတ်မုန့်တွေ ၀ယ်လာ၊ ကျွန်မတို့က စုပေါင်း ကန်တော့ကြ။ ဒါက သူ အိမ်ထောင်မကျခင်ထဲက ခုချိန်ထိ အစဉ်အလာလိုတောင် ဖြစ်နေပြီ။:D
အဖေနဲ့အမေကို ကန်တော့ပြီးတော့ မီးမီးလေးကို တစ်ယောက်ချင်းစီ လိုက်ကန်တော့ခိုင်းတယ်။ မုန့်ဖိုးပေးမယ်ဆိုပြီး ကန်တော့ခိုင်းတာ။ ဟိုကလေးကလည်း အသက်သာ ၁ နှစ်ကျော်ရှိသေး၊ ပိုက်ဆံမှန်းတော့ သိတယ်။ ဦးချလိုက်တာ ပြောမနေနဲ့။ အဲဒီကလေးလေးက သူ့ရှေ့မှာ တခုခုလုပ်ပြလိုက်၊ ၁ မိနစ်တောင် မကြာဘူး။ လိုက်လုပ်တော့တာပဲ။ အတုခိုးတာ အရမ်းမြန်တယ်။ ခု ဘုရားရှိခိုးရင်လည်း ထိခြင်း ငါးပါးနဲ့ ရှိခိုးတာ။ ကျွန်မက နဖူးတွေ၊ တံတောင်တွေ၊ ဒူးတွေနဲ့ ထိအောင် ကန်တော့တာကိုမြင်ပြီး သူအရင်က လက်အုပ်ချီ ကန်တော့သလို မလုပ်တော့ဘဲ ကြမ်းပြင်ကို နဖူးနဲ့ ထိထိပြီး ရှိခိုးတော့တာပဲ။ ကျွန်မတို့မှာ သူ့နဖူးနာမှာစိုးလို့ တားလည်း မရဘူး။ ပြီးတော့ လူကြီးတွေ ဘုရားစာရွတ်သလို ပါးစပ်ကနေ ပွစိ၊ ပွစိနဲ့ ဘာတွေ ရွတ်မှန်းမသိလည်း သူက လုပ်သေးတာ။ ဘုရားရှိခိုးရင် သူ့ပါးစပ်က သေသေချာချာ ပြောတတ်တာဆိုလို့ "သာဓု၊ သာဓု"ပဲရှိတယ်။ ပီတော့ မပီသေးဘူးပေါ့လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မနေ့ညကတော့ သူ့ဦးလေးတွေ၊ အဒေါ်တွေကို တစ်ယောက်ချင်းစီ လိုက်ကန်တော့တာနဲ့ပဲ မုန့်ဖိုး ၄၀ လောက်ရသွားတယ်။ တစ်ယောက် ၅ ကျပ်နဲ့ သူ့ကို ပေးလိုက်တာ။ :P ကျွန်မလည်း ဒီကလေးလေးနဲ့မှ ပထမဆုံး အကန်တော့ခံဖူးတော့တယ်။ ဒီစာရေးနေရင်းနဲ့ တွေးမိသေးတယ်၊ ကိုအန်ဒီတို့လို ကြီးစဉ်ငယ်လိုက် ကန်တော့ရင်တောင် မောင်အငယ်ဆုံးလေးက သူ့ကိုကန်တော့မယ့်သူ ရှိတဲ့အတွက် သဘောတူမှာပဲလို့။ သီတင်းကျွတ် ကန်တော့တဲ့အကြောင်းရေးရင်းနဲ့ မီးမီးလေးအကြောင်းဖြစ်နေပြီ။ တူမလေးကိုတော့ ဘယ်လို ချစ်မှန်းကို မသိဘူး။ တခြားမြို့ကို ၃ ရက်လောက် အလည်သွားတာတောင် ညနေဆို သူ့ကို လွမ်းလိုက်တာ။
အဖေတို့ကို ကျွန်မတို့ မောင်နှမတွေ ၀ိုင်းကန်တော့တုန်းက ရယ်ရသေးတယ်။ ကျွန်မ ခယ်အိုက "ကန်တော့ပါတယ်"လို့ ပါးစပ်က ဆိုပြီး ဦးချတာကို ကျွန်မတို့က ရယ်ကြတာ။ အဲဒီတော့ သူကလည်း ပြန်ရှင်းတယ်။ "ဟုတ်တယ်လေ၊ ကန်တော့တယ်လို့ ပြောပြီး ကန်တော့ရမှာပေါ့"တဲ့။ "အဲလို မပြောလို့ ဘယ်လို ပြောမလဲ"တဲ့။ ဒါနဲ့ ငယ်မက အားရပါးရ ဆရာကြီးလုပ်ချင်ဇောနဲ့ "ကာယကံ၊ ၀စီကံနဲ့ ပစ်မှားမိသည်"လို့ ဆိုရမှာကို "ကာယကံ၊ ၀စိန်ကံလို့" ဆိုမိလို့ ရယ်ကြရသေးတယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ တစ်ယောက်တပေါက်နဲ့ ပါးစပ်က ရွတ်ချင်ရာ ရွတ်ပြီး ကန်တော့လိုက်ကြတယ်။
အဖေနဲ့အမေကို အမြဲတမ်းလိုလို စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ကျွန်မကတော့ အပြစ်နည်းသွားလို နည်းသွားငြား ညအိပ်ရာဝင်တိုင်း ရှိခိုးရွတ်ဆိုနေကျဖြစ်တဲ့ "အဖေနဲ့ အမေကို (ဤနေရာမှ) ရှိခိုးကန်တော့ပါတယ်။ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မနောကံနှင့် ပစ်မှားမိသည်ရှိသော် ခွင့်လွှတ်ပါလို့ တောင်းပန်ပါတယ်"လို့ ပြောပြီး ကန်တော့လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မတို့ရဲ့ ချစ်စရာ မြန်မာ့ဓလေ့လေးကတော့ ကမ္ဘာတည်သရွေ့တည်ရှိနေမယ် ထင်ပါရဲ့။
မှတ်ချက်0 ခု ရေးပြီးချိန်: 10/16/2008 06:51:00 PM
ကျွန်မက မီ နှင့် မှီ ရေးတာ ခဏ ခဏ မှားတတ်တယ်။ ခေတ်မှီတို့၊ မကြာမှီတို့ ရေးတတ်တာ။ အန်တီငြိမ်းက ကျွန်မ မှားရေးထားတာ တွေ့တိုင်း ခေတ်မီ၊ မကြာမီ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြီး အမြဲ ပြန်ပြင်ခိုင်းတယ်။ သုံးခါလောက် အမှားပြင်ပေးပြီးတော့ အန်တီငြိမ်းလည်း စိတ်မရှည်တော့ဘူး။ "သမီးကလည်း ခဏခဏ ပြောနေရတယ်။ မှတ်လည်း မထားဘူး"တဲ့။ ဟီး။ နောက်တခု ကျွန်မ မှားနေကျက လည်းကောင်းနဲ့ ၄င်း ရေးတာပါ။ အဲဒါလည်း အန်တီငြိမ်း သုံး၊ လေးခါလောက် စိတ်မရှည်စွာ ပြောပြပြီးသကာလ ကျွန်မ မမှားတော့ဘူး ထင်ပါရဲ့။:P
ဟထိုးမဲ့ မီ နှင့် ဟထိုးရှိ မှီ ကို မှားရေးတတ်ကြသည်။ မှားရေးတတ်ကြသည့် အကြောင်းရင်းမှာ စကားပြောရာတွင် ဖြစ်စေ၊ စာဖတ်ရာတွင် ဖြစ်စေ မီ နှင့် မှီ အသံတူနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မီ ဟု ရေးသော်လည်း မှီ ဟု ပြောကြ၊ ဖတ်ကြသဖြင့် ဟထိုးမဲ့ မီ ကို ဟထိုးရှိ မှီ ဟု ထင်မှတ်မှားယွင်း ရေးသားကြခြင်းဖြစ်သည်။
အမှန်စင်စစ် မီ နှင့် မှီ မရောထွေးသင့်။
မီ ကား မိ နှင့် အနက်ရင်း တူပါသည်။ ထိမိ၊ ဆက်စပ်၊ ပူးတွဲ၊ ပေါင်းယှဉ်၊ ညီမျှသည့် အနက်ဖြစ်ပါသည်။
ရှေ့မှ ပြေးသူကို လိုက်၍မီသည်ဟု ဆိုရာတွင် လိုက်၍မိသည် ဟူသော အနက်ဖြစ်သဖြင့် မီ သည်ဟုသာ ဟထိုးမဲ့ ရေးရသည်။
အမြင့်တွင်၊ ဘေးတွင်၊ အနိမ့်တွင် ရှိနေသည့် အရာဝတ္ထု တစုံတခုကို လက်လှမ်းမီသည်ဟု ဆိုလျှင်လည်း လှမ်း၍မိသည် ဟူသော အနက်ပင် ဖြစ်သဖြင့် ဟထိုးမဲ့ မီ နှင့်ပင် ရေးရသည်။
အချိန်မီသည်တွင် မီ ၏အနက်မှာ ထိမိ၊ ဆက်စပ်၊ ပူးတွဲ၊ ပေါင်းယှဉ်၊ ညီမျှ အနက်ပင်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်သောအချိန်နှင့် ထိမိဆက်စပ် ပေါင်းယှဉ် ညီမျှသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ သတ်မှတ်သောအချိန်နှင့် ထိမိဆက်စပ် ပေါင်းယှဉ် ညီမျှသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ မလျော့မပိုဖြစ်သည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ထို့အတူပင် ရထားမီသည်၊ ရထားချိန်မီသည်၊ ကျောင်းမီသည်၊ ကျောင်းချိန်မီသည် စသည်တို့၌လည်း နည်းတူဖြစ်သည်။ စံချိန်မီသည်၊ စံမီသည်ဆိုသည်မှာ စံနှင့် မလျော့မပိုဖြစ်သည်။ စံနှင့်ကိုက်ညီသည်ပင် ဖြစ်သည်။ ခေတ်မီသည်ဆိုသည်မှာ ခေတ်နှင့် ကိုက်ညီသည်၊ ခေတ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိသည်ဟု ဆိုလိုသည်။ ၁၅ရက်နေ့ အမီဆိုရာ၌လည်း ၁၅ရက်နေ့ကို မကျော်မလွန် မပိုစေဘဲ၊ ၁၅ရက်နေ့နှင့် ကိုက်ညီစွာဟုပင် ဆိုလိုပေသည်။
ထို့ကြောင့်လည်း မြန်မာစာအဖွဲ့က ပြုစုထုတ်ဝေသော မြန်မာအဘိဓာန်တွင် မီ ကို "မီ၊ ကြိ လှမ်း၍ ရောက်နိုင်၊ ထိနိုင်သည်။ တိုင်ရောက်သည်" ဟု အနက်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းဖြစ်သည်။
အချုပ်ဆိုသော် မိသည့်အနက်၊ တူညီ၊ ကိုက်ညီ၊ ညီမျှသည့်အနက်ကို ဆိုလိုပါက ဟထိုးမဲ့ မီ ကို အသုံးပြုရန် ဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်မီသည်၊ စံမီသည်၊ ရထားမီသည်၊ လိုက်မီသည်၊ လှမ်းမီသည်၊ အချိန်မီသည် စသည်တို့ကဲ့သို့သော ကြိယာဖြစ်သော မီ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြီးနောက် ပစ္စည်းစကားလုံးဖြစ်သော မီ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းရန် ရှိပေသည်။
ယင်း မီ ကို မ နှင့် တွဲ၍ သုံးလေ့ရှိသည်။ မကြာမီ၊ မစားမီ၊ မပြောမီ၊ မလာမီ၊ မသွားမီ စသည်ဖြင့် သုံးသည်။ ခင် ဟူသော စကားနှင့် ဖလှယ်၍ သုံးနိုင်သည်။ မကြာခင်၊ မစားခင်၊ မပြောခင်၊ မလာခင်၊ မသွားခင် ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ကြိယာ မီ ၏ အနက်ဖြစ်သည့် ထိမိ၊ တိုင်ရောက်သည့် အနက်ပင်ဖြစ်သည်။ မကြာမီဆိုသည်မှာ ကြာသည့်ကာလသို့ မတိုင်ရောက်သေးဘဲ ဟူသောအနက်ဖြစ်သည်။ မပြောမီ၊ မလာမီ၊ မသွားမီ စသည်တို့တွင်လည်း ပြောခြင်း၊ လာခြင်း၊ သွားခြင်းသို့ မတိုင်ရောက်သေးဘဲ ဟူသော အနက်ပင်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့်လည်း မြန်မာအဘိဓာန်တွင် "မီ၊ စည်း_'မ' နှင့်တွဲ၍ အချိန်မတိုင်သေးခင် အနက်ဖြင့် ထောက်ပံ့သောစကားလုံး" ဟု အနက်ဖွင့်ဆိုထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။
ဟထိုးရှိ မှီ၏ အနက်မှာ မီစေသည်၊ မီအောင်ပြုသည် ဟူသောအနက်ရှိပေသည်။ တိုင်ကို မှီသည်ဟုဆိုသည်မှာ တိုင်နှင့် ထိအောင် မိအောင်ပြုသည်၊ တိုင်ကို မိစေသည်၊ တိုင်ကို မီစေသည်ပင်ဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထုတခုခု၊ အကြောင်းအရာ တခုခုတွင် မိမိရရ တွယ်ကပ် ချိတ်ဆွဲ ထိမိစေသည်ကိုပင် မှီသည်ဟုဆိုသည်။
ထို့ကြောင့် မြန်မာအဘိဓာန်တွင် "မှီ၊ ကြိ - ၁၊ တစုံတရာကို ယှဉ်ကပ်အားပြုသည်။ ၂၊ အားကိုးအားထားပြုသည်"ဟု အနက်ဖွင့်ဆိုထားပေသည်။ ဟထိုးရှိ မှီ ကို "မှီခိုသည်၊ မှီငြမ်းပြုသည်၊ မှီတင်းသည်၊ မှီဝဲသည်၊ မှီအုံး" စသည်ဖြင့် သုံးစွဲလေ့ရှိသည်။
မီနှင့်မှီ မရှုပ်ထွေးအောင်၊ ရေးကြပါစို့။
အပိုင်း (၈) မှာတော့ မလိုအပ်ဘဲ ပိုတတ်သော ရေးချ ဖြစ်ပါတယ်။
1 comments ရေးပြီးချိန်: 10/12/2008 02:47:00 AM
စာရေးသူ: s0wha1 Labels: s0wha1, Tag
မီးလေးက တက်ဂ်တယ်။ အဲဒီ တက်ဂ်ကို မမိုးချို ဘလော့ဂ်မှာ ဖတ်လိုက်ရပေမယ့် တော်တော်များများ ဒီတက်ဂ်ကို ရေးကြတာ မတွေ့မိသေးသလိုပဲ။ မိသားစုနဲ့ နေတဲ့အတွက် မြန်မာအစားအစာက မငတ်သလောက်ပဲ ဆိုတော့ကာ ဖြစ်သလို မစားရတာများပါတယ်။ တကယ်ကျတော့ ဘာရေးရမှန်းကို မသိတာ။ အဲဒီတော့လည်း ရေးချင်တာ ရေးလိုက်တော့မယ်။
ကျွန်မတို့အိမ်က ထမင်းစားရတာပဲ ကြိုက်ကြတဲ့အတွက် အိမ်မှာ ထမင်းနဲ့ဟင်းကတော့ မပြတ်တမ်း ချက်ရတာပဲ။ ကျွန်မတို့မောင်နှမတွေက အသီးအရွက် အစားနည်းပြီး အသားပဲ စားကြတာဆိုတော့ အသားမျိုးစုံစားကြတယ်။ တစ်ယောက်တမျိုး ချက်တဲ့ လက်ရာတွေ မတူသလို၊ ဘယ်ဟင်းကို ဘယ်သူက အကောင်းဆုံးချက်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပါ မတူကြဘူး။ ကျွန်မအစ်ကိုက ကြက်ဥချဉ်ဟင်း ချက်တာမှာ နာမည်ကြီး။ ကျွန်မကတော့ ၀က်သား အချိုချက်မှာ ဆရာမကြီးပေါ့။ ဟိ။ တကယ်က ၀က်သားနီချက်လို့ ခေါ်တဲ့ ၀က်သားအချိုချက်တင်မကပါဘူး။ ၀က်သားဟင်း မှန်သမျှ ကျွန်မ ချက်တာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောကြတာပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်မ ကြော်တဲ့ ချဉ်ပေါင်ဟင်းကိုလည်း လူကြိုက်များတယ်။ ဒါပေမဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော် မချက်တာကြာလို့ ခုတော့ သိပ်ကောင်းပါ့ဦးမလားဘဲ။ ကျွန်မယောင်းမကတော့ ပုဇွန်ကြော်တာ ဟိုတယ်ချက်အတိုင်းပဲ။ ကျွန်မအမေကတော့ ငါးဟင်း ချက်တာ အရမ်းကောင်း။ ကျွန်မတို့ညီအစ်မက ဘယ်လိုကြောင့်လည်း မသိဘူး။ ငါးဟင်းကို ကောင်းကောင်း မချက်တတ်ကြဘူး။ ကျွန်မတို့ချက်ရင် စားကောင်းတယ်ကို မရှိတာ။ အဖေကတော့ ဘာချက်ချက် စားကောင်းတယ်။ ဒါပေမဲ့ ခု မချက်တာကြာလို့ လက်ရာလည်း ပြတ်နေလောက်ပြီ။ ကျွန်မညီမက ကြက်ကာလသားချက် ကောင်းတယ်။ ဘူးသီးလေးနဲ့ ရေချိုလေး ချက်ရတာလေ။ ပြီးတော့ ဘဲသားဟင်းချက်လည်း ကောင်းတယ်။ ကျွန်မအစ်မကျတော့ ငါးဟင်းကလွဲလို့ ဘာချက်ချက် စားကောင်းတယ်။ ၀က်သားဟင်းချက်တာကတော့ ကျွန်မကို ဘယ်မှီမလဲလေ။ ဟဲ။
ပြောရရင်တော့ မောင်အငယ်ဆုံးကလွဲလို့ အိမ်ရှိလူကုန် ဟင်းချက်တတ်တယ်။ (အဲဒီ မောင်အငယ်ဆုံးကတော့ သူစားဖို့ ထမင်းတောင် ခူးပေးရတဲ့ လူစား။) ကျွန်မတို့ကို ထမင်းဟင်းချက်တာ ဘယ်သူမှ သင်မပေးခဲ့ရပါဘူး။ အဖေနဲ့အမေက ဘာတခုမှလည်း မခိုင်းဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ထင်ရာ၊ မြင်ရာ လုပ်ရင်းနဲ့ ချက်တတ်ကြတာပဲ။ တကယ်ကျတော့ ဟင်းချက်တာ ဘာမှ မခက်ဘူး။ ဖွယ်ဖွယ်ရာရာဖြစ်အောင်သာ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ မချက်တတ်တာပဲ ရှိမယ်။ စားကောင်းအောင်၊ စားလို့အဆင်ပြေအောင် ချက်ဖို့ကတော့ ကျွန်မတို့အတွက် မခက်ခဲဘူးထင်တာပဲ။ အသားတုံးတွေ နယ်ဖက်ပြီး ဆီလေးသတ်လိုက်ရုံပဲ မဟုတ်လား။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်သူမှ အချက်အပြုတ် ၀ါသနာ မပါတာခက်တယ်။ ကျွန်မတို့ကို အမေပြောနေကျ စကားရှိတယ်။ ထမင်းအိုးတလုံးတည်ဖို့ အမြှောက်ပစ်ချရတာထက်တောင် ခက်သေးတယ်တဲ့။ သူချက်၊ ကိုယ်ချက်နဲ့ တွက်ကပ်နေကြလို့လေ။
ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်က အမေရန်ကုန်က ပြန်လာတော့ ထမနဲတွေကို ပလပ်စတစ်အိတ်နဲ့ ထုပ်ပြီး ၄ ထုပ်လောက်သယ်လာတယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်က အဲလိုပဲ။ ရန်ကုန်ပြန်ပြီဆိုတာနဲ့ ကီလိုအကုန် စာအုပ်နဲ့ အစားအစာမျိုးစုံ သယ်လာတော့တာ။ ပဲဆီက အစ ပါတယ်။ ငါးရန့်ခြောက်ဖုတ် ဆီဆမ်းလို၊ ကြက်သွန်နီနဲ့ သုပ်ထားတဲ့ ပဲပြုတ်သုပ်လိုမျိုးတွေကို ပဲဆီနဲ့စားရရင် ဆွေမျိုးတောင် မေ့နိုင်တယ်။ ထားပါတော့ ထမနဲအကြောင်း ဆက်ပြောရရင် ရေခဲသေတ္တာထဲ ထည့်ထားတော့ အေးခဲပြီး မာနေပြီ။ အဲဒါကို စားချင်ရင် ရေလေးနည်းနည်းနဲ့ ဆီလေး နည်းနည်းထည့်ပြီး မွှေပေးလိုက်ရင် ခုချက်ချင်း ထိုးထားတဲ့ ထမနဲလို ဖြစ်လာရော။ စားလို့ကောင်းမှ ကောင်းပဲ။ ဟိုရက်ကတော့ ဆီနဲ့ ကြော်လိုက်တာ ကြွပ်ရွပြီး မာသွားတယ်။ ခုမှ ရေလေး ထည့်ပြီး ပြန်နွှေးရတဲ့ နည်းကို စမ်းလုပ်ကြည့်ရင်း သိတာ။
ဘာရယ် ဟုတ်ဘူး။ ထမနဲ အကြောင်း ရေးမယ်ဆိုပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ထားတာ။ ခုတော့ ရေးချင်တော့ပြီ။ ဒီမှာပဲ တင်လိုက်ပြီ။ :D
အိမ်က လူတွေက အလုပ်မသွားခင် မနက်ထမင်း စားသွားကြတယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်က မနက်ထမင်း၊ နေ့လယ် ထမင်း၊ ညနေထမင်းနဲ့ ထမင်းကိုပဲ စားစရာလို့ ထင်တယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း တရက် အဖေ့သူငယ်ချင်းက အိမ်လာလည်ရင်း ကျွန်မတို့ အိမ်နောက်ဖေး မီးဖိုချောင်ကို ရောက်တော့ "ခင်ဗျားတို့ မီးဖိုချောင်ကလည်း အိမ်ဆိုင်လေးကျနေတာပဲ ပြီးတော့ ချက်ထားတာကလည်း အလှူအိမ်အတိုင်းပဲ"တဲ့။ ဆန်က အိတ်လိုက်၊ ဆီက ပုံးလိုက်၊ ကြက်သွန်ဖြူနီက အိတ်နဲ့ ထောင်ထားရတာကို။ မိသားစုဝင်ကလည်း များတယ် မဟုတ်လား။ ဆန်က အိတ်လိုက်ဆိုတာ ကျွန်မတို့က ၁၀ ကီလို၊ ကီလို ၂၀ အိတ်လေးတွေကို လက်လီ ၀ယ်မစားဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုပဲ ဂုန်နီအိတ်နဲ့ ဆန်အိတ်ကြီးကို မှာစားတာ။ ဆီလည်း အဲလိုပဲ။ သံပုံးကြီးနဲ့ တခါထဲ ၀ယ်ထားတာ။ ပြီးတော့မှ ပိုက်နဲ့ ပြန်ချူပြီး သုံးတာပေါ့။ ကြက်သွန်ဖြူနီကလည်း အိတ်အနီကြီးနဲ့ တအိတ်။ အဲလို ၀ယ်ထားရတာ။ ဆီတွေ၊ ဆန်တွေကလည်း အိမ်တိုင်ယာရောက် လာပို့တဲ့အတွက် သယ်စရာလည်း မလိုတော့ဘူး။ ထမင်းကတော့ ပေါင်းအိုး နှစ်အိုးကို လက်မလည်တမ်း တည်နေရတာ။ ဟင်းကတော့ ဒယ်အိုးအကြီးကြီးနဲ့ အပြည့်။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေလို နေ့မျိုးဆိုရင်တော့ စားစရာ ဟင်းတွေက စားပွဲပေါ်မှာတောင် မဆန့်ဘူး။
ကျွန်မတို့ကတော့ ဒီမှာ အပြင်စာ စားတာ နည်းပါတယ်။ ဒီက အစားအသောက်တွေကလည်း ကောင်းမှ မကောင်းတာ။ စားသောက်ဆိုင်တို့၊ ဟိုတယ်တို့က အစားအစာတော့ မပါဘူးပေါ့။ Food Court က အစားအစာတွေကို ပြောတာ။ တသက်နဲ့ တကိုယ် ဒီလောက်ညံ့တဲ့ အစားအသောက်တွေ မတွေ့ဖူးဘူးလို့ ထင်တာပဲ။ စားလို့ဖြစ်တာတွေလည်း အများအပြားတော့ ရှိပါတယ်။
ကျွန်မတို့အိမ်မှာ အစားအသောက်တွေကို ဆန်းဆန်းပြားပြားမျိုးစုံ စားရတယ်။ များသောအားဖြင့် အဲလို အထူးအဆန်းတွေကို ကျွန်မအမေ ချက်တယ်။ ကျွန်မတို့အတွက်တော့ အဆန်းတကြယ် မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ။ တချို့သူတွေက တခါမှ မကြားဖူး၊ မစားဖူးဘူးလို့ ပြောကြတာကိုး။ တချို့တွေကတော့ သိမှာပါ။ ပထမ တမျိုးက ငါးရံ့ကို ဗိုက်ခွဲ၊ ဂျင်းတွေ၊ ငရုတ်သီးတွေနဲ့ အစာသွပ်ပြီး စပါးလင်နဲ့ ပြန်ချည် ဆန် လက်တဆုပ်လောက်ထည့်ပြီး ရေချိုလေး ချက်တာ။ အဲဒါကို ကျွန်မတို့မောင်နှမ အသားကုန်ကြိုက်ပေါ့။ ငါးရံ့ဆန်လှော်ဟင်းလို့ ကျွန်မတို့ ခေါ်တယ်။ ပြီးတော့ လယ်ကြွက်ခြောက်တို့၊ ငါးရှဉ့်ခြောက်တိုက်တို့၊ ဖားသားတို့၊ ဆတ်သားခြောက်တို့ကို ငရုတ်သီးစပ်စပ်လေးနဲ့ အကြွပ်ကြော်တာလည်း ကျွန်မတို့အကြိုက်ဆုံး အစားအစာထဲမှာ ပါသေးတယ်။ တရှူးရှူးတရှဲရှဲနဲ့ နှာရည်တွေကျ၊ ချွေးတွေ ထွက်နေပေမယ့် စားလို့မရပ်နိုင်ဘူး။ ခရုဆန်လှော်ပြုတ်လည်း စားကောင်းတာပဲ။ အဲလို ခရုမာမာလေးတွေကတော့ ရန်ကုန်မှာပဲ ရှိတယ်။ ဒီမှာတော့ မတွေ့မိဘူး။ ပြီးရင် ၀က်မြီးတို့၊ ၀က်လျှာတို့ ချက်စားတာလည်း တမျိုးစားကောင်းတယ်။
ကြက်ဥကို ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ကြော်ချက်ချက်တာကို ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းကြိုက်ခဲ့တယ်။ ခုချိန် ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ကြော်စားတော့ စားမကောင်းဘူး။ အဖေချက်ကျွေးရင် တော်တော်ကောင်းတာ။ ၀က်သားချဉ်နဲ့ အမဲသားချဉ် ချက်ကတော့ ကျွန်မတို့ အကြိုက်ဆုံးပဲ။ အဲဒီအသားတွေကို တရက်၊ နှစ်ရက်လောက် အချဉ်ဖောက်ရတယ်။ အချဉ်ဖောက်တာ လွယ်ပါတယ်။ အသားတုံးတွေကို ထမင်း လက်တဆုပ်လောက်နဲ့ ရောနယ်ပြီး အဖုံးလုံအောင်ပိတ် သိမ်းထားလိုက်ရုံ။ နောက်ရက်ကျ အချဉ်ပေါက်နေတဲ့ အသားတွေကို ငရုတ်သီးစပ်စပ်နဲ့ ချက်လိုက်ရင် သူ့ထက် စားကောင်းတာတောင် သူ့လောက် စားကောင်းမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကြက်သားကို ပြုတ်ကြော်ပြီး ခရမ်းချဉ်သီးနဲ့ ပြန်ချက်တာလည်း စားလို့ကောင်းတာပဲ။
ပြီးတော့ ငါးလေးအိုးကပ်တို့၊ ငါးခူစင်းကော်တို့၊ ဘဲပေါင်း ကြံမဆိုင်တို့၊ ငါးရံ့အူဟင်းတို့၊ ငါးကြည်းကြပ်တိုက်တို့၊ ပုဇွန်စုတ်ဖွားကြော်တို့ကတော့ ကျွန်မတို့ အိမ်ရဲ့ နာမည်ကြီးဟင်းတွေပေါ့။ နာမည်ကြီးဆိုတာ ကျွန်မတို့ အရမ်းကြိုက်တာကို ပြောတာ။ :D ငါးဖယ် ရေချိုချက်တာလည်း စားကောင်းတာပဲ။ ဒီမှာတော့ မရှိဘူး။ ဟိုတရက်က ကျွန်မအစ်မ ရန်ကုန်ကပြန်လာတော့ ငါးဖယ် သုံးကောင် သယ်လာတယ်။ အဲဒါကို စဉ့်နှီတုံးတွေ၊ ငရုတ်ဆုံတွေနဲ့ ဖိပြီး မာအောင် လုပ်ထားရတယ်။ ပြီးမှ သုံးပိုင်းစီ ပိုင်းပြီး ချက်ရတာ။ လောပိတမှာတုန်းကတော့ ခဏခဏ စားရပါ့။
ဒီနေ့ကတော့ ဆိတ်သားခြောက် ဆီပြန်ဟင်း ချက်တယ်။ အဲဒါကို ငရုတ်သီးနဲ့ အစပ်ကြော်လည်း ကောင်းတာပါပဲ။ ကျွန်မတို့ဟင်းတွေထဲ ငရုတ်သီးမပါတာ ခပ်ရှားရှားနော်။ အစပ်အရမ်းစားတဲ့ မိသားစုလို့ ပြောရမယ်။ လောပိတမှာ နေတုန်းက ကယားငရုတ်တွေကို အိတ်လိုက် ထောင်စားတာ။ ဒီမှာကျတော့ တမျိုး။ ရန်ကုန်အိမ်ကလူတွေကို ငရုတ်သီးတောင့်တွေ ထောင်းခိုင်းပြီး ဒီကို သယ်လာတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်၊ ချက်ခါနီးမှ လှီးချွတ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူနီနဲ့ ရောပြီး ဆီသပ်လိုက်ရုံပဲ။ အရောင်တင်မှုန့်မသုံးဘဲ ငရုတ်သီး ထောင်းစရာမလိုတဲ့ နည်းပေါ့။ ဟီဟီ။ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရေးထားတာတွေနဲ့ကတော့ တခြားစီပဲ။
ကဲ... နောက်ထပ် ဖြစ်သလို စားနေကျလေး ကျွန်မရေးစေချင်တဲ့သူတွေက ထုံးစံအတိုင်း ကျွန်မ တက်ဂ်နေကျ အန်တီငြိမ်း၊ အန်တီခင်၊ ညီမလေး လင်းလက်၊ ကျွန်မ တခါမှ မတက်ဂ်ဖူးသေးတဲ့ ကိုလူသစ်၊ တခါလား မသိဘူး တက်ဂ်ဖူးတဲ့ ကိုမောင်ရင်။ ကိုယ်သာ ဘာရေးရမှန်း မသိတာ။ သူများရေးတာတော့ ဖတ်ချင်သား။ ရေးပေးကြနော်... :D
မှတ်ချက်5 ခု ရေးပြီးချိန်: 10/10/2008 03:28:00 PM